सूर्य थापालाई अर्थमन्त्री मौसमको कडा प्रहार, भने– असन्तुलित थुतुनो नचलाऊ ! - Everest Dainik - News from Nepal
सूर्य थापालाई अर्थमन्त्री मौसमको कडा प्रहार, भने– असन्तुलित थुतुनो नचलाऊ !
काठमाडौंः प्रदेश १ का अर्थमन्त्री ईन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाप्रति कडा प्रहार गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री मौसमले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाका अभिव्यक्ति बहुसङख्यक नागरिकले नरुचाएको भन्दै थुतुनो धेरै नचलाउन आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा मौसमले सूर्य थापाप्रति इकिंत गर्दै लेखेका छन्, ‘कमरेड, तपाईंको अभव्यिक्ति बहुसंख्यक नागरिकले कत्ति पनि रुचाएका छ्रैनन् । बरु झन अविश्वास, आशंका र भ्रम सिर्जना भइरहेको छ ।’
उनले अगाडि सुझाव दिँदै भनेका छन्, ‘त्यस्तो असन्तुलित थुतुनो धेरै नचलाउँदा नै सरकार, पार्टी र देशको निम्ति हित होला ।’
सोमबार नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहँदा राम्रो काम गरेको भन्दै पुनः नियुक्ति हुने अपेक्षासहितको स्टाटस ट्वीट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिलाई कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस बिरामीको दाँत ठेलेर शिविर उद्घाटन गरिएपछि...
ट्याग्स: ईन्द्र आङ्बो ‘मौसम’, प्रदेश १, सूर्य थापा